Tsy fandriampahalemana, fiakaran’ny vidim-piainana: mitaky ny hijerena ny sosialim-bahoaka ny Seces Tana | NewsMada
Tsy fandriampahalemana, fiakaran’ny vidim-piainana: mitaky ny hijerena ny sosialim-bahoaka ny Seces Tana
Miaina ao anatin’ny fijaliana tanteraka ny vahoaka, ankehitriny, satria mirongatra izaitsizy ny tsy fandriampahalemana, midangana ny vidim-piainana sy ny zavatra ilaina andavanandro, araka ny fanambaran’ny Seces Antananarivo, omaly. Manoloana izany, miantso ny fitondrana mahefa izy ireo mba hitondra vahaolana maharitra ny amin’izany.
Ankoatra izany, naka fepetra izy ireo manomboka amin’izao taom-pianarana vaovao izao. Nambarany tamin’izany fa ny fetr’asa tsy maintsy tanterahina (“Obligation de service”) ihany no hataon’ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin’ny Seces. Hatao izany mba hisorohana ny fitakiana ny “Vacation” sy ny ora fanampiny amin’ny alalan’ny fitokonana.
Anjaran’ny fanjakana ny mitady ireo mpampianatra antselika hiantsoroka ny famenoana ny fahabangana mihoa-pampana eo amin’ny asa fampianarana ambony ary indrindra fa ny fandoavana ara-potoana izany valin-kasasaran’ny mpampianatra izany.
Mitaky fanadihadiana lalina
Saropiaro amin’ny zo sy hasin’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ary indrindra amin’ireo toeram-pikarohana sy toeram-pampianarana ambony miankina amin’ny fanjakana ny Seces Sampana Antananarivo. Tsy manaiky velively ny mety ho fikasana hamindra ny fitantanana azy ireny amin’ny tsy miankina.
Tsy mametraka olana ny amin’ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny tsy miankina kosa anefa ny Seces.
Miombona alahelo amin’ireo mpiasa sy ny fianakaviamben’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa koa ny Seces Antananarivo eo anatrehan’ny fahamaizan’ny tranoben’ny CNRIT Fiadanana ary mitaky ny fanadihadiana lalina momba ny anton’ny fahamaizana.